Otu esi eji AntispamSniper maka Bat!
N'ezie, onye ọ bụla n'ime anyị ezutewo ozi-e na-achọghị na ya na igbe mbata - spam. N'agbanyeghi n'emeela ụdị ozi-e na nhazi ozi, na mgbasa ozi na ọbụna ozi e-mail na-ezighi ezi ka anyi na-abanye na Igbe mbata.
Ịtọ ozi Mail.Ru na Bat!
Iji ozi mail.Ru na-arụ ọrụ nke ọma ma na ihe nchọgharị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na e-mail site na iji ngwanrọ kwesịrị ekwesị, ị ga-enwe ike ịhazi ya n'ụzọ ziri ezi. N'isiokwu a, anyị ga-elele otu esi ahazie otu n'ime Bat!
Ebee ka onye na-ahụ maka ozi ahịa bụ Bat!
Mgbe ị na-eji Bat! Ị nwere ike ịjụ, sị: "Ebee ka usoro ihe a na-echekwa ozi niile na-abata?" Nke ahụ bụ, ọ pụtara nchekwa dị na diski ike nke kọmputa ebe onye ozi "na - agbakwụnye," akwụkwọ ozi ebudatara na sava. Ụdị ajụjụ a adịghị ajụ. O yikarịrị ka ị weghachitere onye ahịa ma ọ bụ ọbụna sistemụ arụmọrụ, ma ugbu a, ịchọrọ iweghachi ọdịnaya nke nchekwa folda.
Dezie onye ahịa ozi na Bat!
Onye nlele ozi-e na Ritlabs bụ otu n'ime usoro mmemme kacha mma. Bat! ọ bụghị nanị na-abanye n'ime ndị na-azụ ahịa ndị kasị echebe, ma dị iche na nhazi nke ọrụ dị oke iche, nakwa dị ka mgbanwe nke ọrụ. Ojiji nke ngwanrọ ngwanrọ dị otú ahụ nwere ike iyi ihe siri ike nye ọtụtụ ndị.
Ịtọ Yandex.Mail na Bat!
Onye ahịa Email The Bat! bụ otu n'ime ihe omume kachasị ngwa ngwa, kacha dịrị nchebe na ọrụ kachasị mma iji rụọ ọrụ na kọmputa. Ngwaahịa a kwadoro ọrụ ọ bụla email, gụnyere ndị si Yandex. Kpọmkwem otu esi ahazi Bat! maka ọrụ zuru oke na Yandex.
Debe Gmail na Bat!
Iji rụọ ọrụ na Gmail na kọmpụta gị, ị nwere ike iji ọ bụghị naanị sistemụ weebụ nke ọrụ ahụ, kamakwa usoro ihe omume dị iche iche nke atọ. Otu n'ime mkpebi kachasị mma dị otú a bụ Bat! - onye na-elekọta mail na-arụ ọrụ na nchebe dị elu. Ọ bụ maka ịmepụta "Bat" maka ịmekọrịta zuru ezu na igbe Gmail gị ma bụrụ ndị a ga-atụle n'isiokwu a.
Izizi njehie "Server adịghị eweta akwụkwọ mgbọrọgwụ" na Bat!
Ikwesiri ike na ịrụ ọrụ - otu n'ime isi ihe mere eji eji Bat! na kọmputa gị. Ọzọkwa, ọ dịghị otu n'ime ihe ndị a dị ugbu a nke usoro a nwere ike ịnya isi maka ọrụ dị otú a maka ijikwa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke igbe ozi email. Dị ka ụdị software ọ bụla dị mgbagwoju anya, Bat!
https://termotools.com ig.termotools.com © Bat! 2019